Axmed madoobe oo shaaciyay tirda dadkii ku dhintay qaraxii kismaayo
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Sayid Axmed Maxamed Islaam oo Saxaafada la hadlay ayaa ka tacsiyeeyay dadkii ku waxyeeloobay Qaraxii iyo weerarkii Argagixisadu ku qaaday Hotelka Madiina isagoona ka warbixiyay sida ay wax u dheceen. Madaxweynahu wuxuu sheegay in 26 qof ay ku dhinteen weerarka halka 56 kalana ay ku dhaawacmeen isagoo sheegay in dadka dhintay […]
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa xalay kulan socday mudo laba saac ku dhow ku yeeshay Magaaladda Muqdisho. Kulanka oo ay goob joog ahaayeen guddoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha Shacabka Mudane Cabdiwali Sheekh Ibraahim ‘’Muudey’’ […]
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tacsi u diray qoysaska iyo ehellada muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku naf waayey weerarkii argagixisanimo ee ka dhacay magaalada Kismaayo. Madaxweynaha ayaa u rajeeyey dadka dhaawacyadu ay ka soo gaareen weerarkan arxan darrada ah in uu Alle u boogo dhayo, isagoona Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ku jiheeyay in […]
Xoghayaha guud ee Jimciyadda Qaruumaha ka dhaxeysa, António Guterres, ayaa cambaareeyay weerarkii is-miidaaminta ahaa ee ay Argagixisadu ku qaadday Xalay Hotel ku yaalla Magaalada Kismaayo. Afhayeenka xoghayaha guud, Stephene Dujarric, ayaa sheegay in sidoo kale uu Mr; Guterres uu tacsi tiiraanyo leh u dirayo Qoysaska kuwa naftooda ku waayay weerarka wuxuuna u rajeeyay in ay […]
DAAWO SAWIRRO:-26-Ruux oo ku dhintay Weerarkii iyo Sawirro Laga soo Qaaday Hotelkii la Weeraray shalay
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo Saxaafada la hadlay ayaa ka tacsiyeeyay dadkii ku waxyeeloobay Qaraxii iyo weerarkii al-shabaab ku qaaday Hotelka Madiina isagoona ka warbixiyay sida ay wax u dheceen. Madoobe ayaa sheegay in 26 qof ay ku dhinteen weerarka halka 56 kalana ay ku dhaawacmeen isagoo sheegay in dadka dhintay ay ku […]
DAAWO:-Nimco Yaasin Caraale ” Waxaan U Imid Hargeisa Inaan Labada Qoys Kala Saaro “
Fanaanada nimco yaasiin caraale ayaa safar ku timid magaalada hargaysa si ay u kala saarto labo qoys oo isku haya taasi oo muran xoogan ka dhalisay gayiga soomaalidu dagto Safarkeeda ayaa xiligan sida ay sheegtay in uu salka ku hayo baadhitaan lagu samayn doono dhiiga NA loo yaqaano sii loo cadeeyo qoyska ay ka dhalatay
Xaalada Ceerigaabo, Wararkii ugu dambeeyay iyo Halka uu Saldhigtay Kornayl Caare oo dagaal kula jira maamulka muuse biixi
Xaalada Magaalada Ceerigaabo iyo Deegaano kale oo ka tirsan Gobolka Sanaag oo ay shalay ka dhaceen Dagaalo iyo Banaaxyo Rabshado watay ayaa maanta degan. Magaalada Ceerigaabo ayaa lagu soo Waramayaa in Habaynkii Xalay lagu soo Rogay Xaalad BANDOW ah, Waxaana maanta dib u bilowday isku socodka Gaadiidka iyo Ganacsiga, Walow Qaybo kamid ah magaalada Xiisadaasi […]
DAAWO:-Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka Dalka Oo Guddoomiyay Shirka Toddobaalaha Ah Ee Golaha Wasiirrada
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka dalka, mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) ayaa maanta guddoomiyay shirka golaha wasiirrada oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. Kulanka ay golohu yeesheen ayaa looga hadlay sharciga difaaca qaranka iyo siyaasadda daryeelka bulshada oo ay soo gudbiyeen wasaaradaha difaaca iyo shaqada. Shirka ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay warbixin ku saabsan xaaladda amniga guud […]
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu ka tiiraanyeysan yahay shaqaaqada iyo colaadda dadka walaalaha ah ee ka socota deegaanka Ceel-Afwen ee Gobolka Sanaag, taas oo sababtay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh. Madaxweynuhu waxa uu tacsi u dirayaa ehelada iyo qaraabada dadkii walaalaha ahaa ee ku geeriyooday dirirtan macno darrada ah, waxa […]